China YASKAWA laser welding robot MOTOMAN-AR900 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
YASKAWA laser iwelding irobhothi MOTOMAN-AR900
Umsebenzi omncinci laser welding irobhothi UMOTOMAN-AR900, I-6-axis nkqo yokudibanisa ngokudibeneyo Uhlobo, owona mthwalo uphezulu we-7Kg, ubuninzi be-elongation ephezulu ye-927mm, efanelekileyo kwi-YRC1000 yolawulo lwekhabhinethi, ukusetyenziswa kubandakanya i-arc welding, i-laser processing, kunye nokuphathwa. Inozinzo oluphezulu kwaye ilungele uninzi Olu hlobo lwendawo yokusebenza, olungenaxabiso, lukhetho lokuqala lweenkampani ezininziIMOTOMAN Yaskawa irobhothi.
Laser Welding Robot Inkcazo:
Xa kuthelekiswa neemodeli zangaphambili, ifayile ye- Uthotho lweMOTOMAN-AR ye Iirobhothi zewelding zeYaskawa iphucule inkululeko yokuhamba, ubumbano kunye nokunciphisa ubungakanani beerobhothi. Iirobhothi zinokubekwa koxinano oluphezulu, olugcina indawo kubathengi kwizixhobo zemveliso.
Umsebenzi omncinci laser welding irobhothi UMOTOMAN-AR900, I-6-axis nkqo yokudibanisa ngokudibeneyo Uhlobo, owona mthwalo uphezulu we-7Kg, ubuninzi be-elongation ephezulu ye-927mm, efanelekileyo kwi-YRC1000 yolawulo lwekhabhinethi, ukusetyenziswa kubandakanya i-arc welding, i-laser processing, kunye nokuphathwa. Inokuzinza okuphezulu kwaye ilungele uninzi Olu hlobo lwendawo yokusebenza, engabizi mali, lukhetho lokuqala lweenkampani ezininzi IMOTOMAN Yaskawa robot.
Inkqubo ye- laser welding irobhothi UMOTOMAN-AR900 inokuxhotyiswa ngeendlela ezahlukeneyo i-servo welding guns and sensors. Ngokusebenzisa isantya esiphezulu, inokunciphisa ukubetha. Yamkela uyilo olucutha uphazamiseko phakathi kwengalo kunye nezixhobo zepheripherali, kwaye lulungeleiindawo ezincinci zokuwelda.
Iinkcukacha zobugcisa ze Laser Welding Robot :
Ukutsha koku irobhothi entsha ye-laser welding kulwakhiwo, ukusebenza kunye nokusebenza kuphucula inkululeko yokuhamba kunye nokuxinana komzimba. Iqwalasele ukwenziwa lula kwenkqubo yokufaka kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso. Ngapha koko, inkampani ligunyaziso lokuqala lokuthengisa emva kokuthengisa umboneleli waseYaskawa, kwaye ulondolozo lwezixhobo luqinisekisiwe.
Egqithileyo I-YASKAWA AUTOMOBIL yokutshiza i-robot MPX1150
Okulandelayo: YASKAWA oluzenzekelayo ukuwelda irobhothi AR1440
Iirobhothi zewelding zeshishini
Umatshini weRobotic Mig Welding
Izicelo zeWotting Welding
Ukuzenzekelayo kweRobotic Welding
Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphatha ingalo yeRobot,